एमाले नमोबुद्ध नगर अधिवेशनः गोकुल बाँस्कोटालाइ महेश बस्नेत गुटको काउन्टर ! – मिलिजुली खबर
एमाले नमोबुद्ध नगर अधिवेशनः गोकुल बाँस्कोटालाइ महेश बस्नेत गुटको काउन्टर !
काभ्रेमा महेश बस्नेत गुट जर्बजस्त स्थापित भएको छ ।
नमोबुद्ध नगरपालिकामा भएको एमाले अधिवेशनबाट काभ्रेमा महेश बस्नेत गुट सतहमा आएको हो । जब अधिवेशन उद्घाटन पछि स्थागित भयो । त्यसपछि नै अन्य पालिकाका एमाले कार्यकर्ताह?ले अनुमान गरिसकेका थिए महेश बस्नेत समूहको गढबढी सु? भयो भनेर ।
काभ्रेमा एमाले फुटपछि पूर्व मन्त्री एवं एमाले काभ्रे जिल्ला इन्चार्ज गोकुल बाँस्कोटाको एकल समूह मात्रै रहेको दाबी भइरहेको बेला नमोबुद्ध नगर अधिवेशनबाट महेश बस्नेत समूहले आफ्नो समूह पनि रहेको बाँस्कोटालाई खुलामखुल्ला चुनौती दिएका छन् । काभ्रेमा महेश बस्नेत समूहको नेतृत्व राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अमित लामाले गरिरहेको बाँस्कोटा समूहको दाबी छ ।
आफु बाहेक केन्द्रिय अन्य कुनै पनि नेताह?को प्रभाव जिल्लामा नदेखियोस् भनेरै गोकुल बाँस्कोटा वडा अधिवेशनदेखि नै निकै सजग देखिनुहुन्थ्यो । जिल्लाको धेरै वडा अधिवेशन उदघाटनमा बाँस्कोटाको भ्याइनभ्याइ थियो ।
जिल्लाको ६ मध्ये बनेपा, धुलिखेल, पाँचखाल र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाको अधिवेशन पनि बाँस्कोटाले एकैदिन भौतिक ?पमै उपस्थित भएर उदघाटन गर्नुभएको थियो । तर बाँस्कोटाको सजकता नमोबुद्ध नगरपालिकामा सफल भएन् । नमोबुद्ध नगरपालिकामा महेश बस्नेतको समूहले पदाधिकारीमा आफुह?को पनि सम्मानजनक हैसियत खोजेपछि अधिवेशन मतदानमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।
९ गते जिल्लाको १० वटा पालिकामा एमालेको अधिवेशन सु? भएको थियो । सबै नगरपालिकामा नेतृत्वका लागि विवाद भएपनि ९ वटा पालिकाले अन्तिम समयसम्म प्रयत्न गरेर सर्वसम्मत नेतृत्व छनौट गरे । तर नमोबुद्ध नगरपालिकामा सदस्य निर्विरोध निर्वाचित भए पनि पाँचजना पदाधिकारीका लागि भने निर्वाचन गरियो ।
एक जना अध्यक्षको लागि चार जना उम्मेदवार बीच मतदान भएको थियो । जसमा ८१ मत ल्याएर कृष्ण खनाल नगर अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । सञ्जीव ढकालले ४४, पुर्ण पान्डेले ११ र उद्धव हुमागाईले ४६ मत ल्याउनुभयो ।
उपाध्यक्षमा कृष्ण बहादुर तामाङले सानदान ढंगले विजयी हुनुभयो । उपाध्यक्ष लागि तामाङ र निर्मला सापकोटा भुर्तेल बीच मतदान भएको थियो । मत परिणाम अनुसार तामाङले ११३ मत ल्याउँदा भुर्तेलले ६० मतमा मात्रै चित्त बुझाउनु परेको थियो ।
सचिबमा गणेश लामा पनि सानदार मत सहित विजयी हुनुभएको छ । सचिबमा लामा सहित निरोज पाण्डे र उपेन्द्र अधिकारी बीच मतदान भएको थियो । जसमा लामाले १०३ मत ल्याएर विजयी हुँदा पाण्डेले १५ मत र अधिकारीले ५५ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो ।
नगर अधिवेशनबाट चयन हुने २ जना उपसचिबमा ८ जनाले प्रतिस्पर्धा जनाएका थिए । त्यसमा हरिराम प्याकुरेल ५६ मत र सम्झना लामा ६१ मत ल्याएर विजयी हुनुभयो ।
केदार प्रसाद ओझाको ६ मत, सुरजकुमार न्यौपानेको २८ मत, कान्छामान लामा ९तामाङ० को ३६ मत, कृष्ण कुमार लामाको ४० मत, गंगादेवी लुइँटेल ९तिमल्सिना० को ३९ र अर्जुन बहादुर कार्कीले ५० मत प्राप्त गर्नुभएको हो ।
मतदानबाट निर्वाचित अध्यक्ष खनाल, उपाध्यक्ष तामाङ, सचिव लामा र सहसचिब प्याकुरेल बाँस्कोटा समूहको मानिएका छन् भने सम्झना लामा महेश बस्नेत समूहको रहेको चर्चा हुन थालेको छन् ।
रोशी गाउँपालिकामा पनि एमाले नेतृत्वका लागि ठूलो बहस चलेको छ । रोशी गाउँपालिका राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष अमित लामाको जन्म थलो पनि हो । रोशी गाउँपालिकाको १२ वटै वडामा एमालेले वडा अधिवेशन समेत गर्न सकेको छैन । यसमा पनि गुटगत स्वार्थ रहेको बताइएको छ ।
खानीखोला र बेथानचोक गाउँपालिकामा पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन् । यी दुबै पालिकामा पनि बाँस्कोटा र बस्नेत समूहको टकराब रहेको बताइएको छ । यद्यदी कात्तिक १३ गते खानीखोला गाउँपालिका र १५ गते बेथानचोक गाउँपालिकामा एमाले अधिवेशन बाँस्कोटाले नै उदघाटन गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ ।
धुलिखेल एमालेको राम्रो अभ्यासः युवा र विद्यार्थीले हटाए अधिवेशनको प्रचार सामग्री
एमाले काभ्रेको पालिका अधिवेशनः यी चार महिलाले पदाधिकारीमा आफुलाई गरे स्थापित